Tattoo madow ayaa kacay: macnaha iyo uruurinta naqshadaha | Tattoo
Tattoo madow ayaa kacay: ururinta naqshadaha iyo sharraxaadda macnahooda
Weligaa ma isweydiisay sababta dadku u helaan tattoo madow oo madow ah? Sidii aan horey uga soo hadalnay maqaallo kale, waxaa jira qaabab ubaxeedyo cayn kasta leh oo, taas oo ku xidhan midabka taranka, waxay leeyihiin hal macne ama mid kale. The Tattoo madow ayaa soo caanbaxay iyo maqaalkan oo dhan waxaan si faahfaahsan ugu sharraxeynaa macnihiisa inta aan soo uruurineyno nashqado kala duwan.
Sidii aan horey u soo tilmaannay, macnaha tattoos Rose Way kala duwanaan doontaa iyadoo kuxiran midabka caleenta ubaxa. Xaaladda ubaxyada madow, sidaad filan lahayd, waxay leedahay astaan ​​mugdi ah oo mug leh waxayna la xiriirtaa dhinacyo taban. Laakiin, Muxuu mugdiga madoowga tattoos ka dhigan yahay? Dad badan astaan ​​u ah geeri iyo xanuun.
1 Micnaha tattoo-madow kacay
2 Sawirrada Black Rose Tattoos
3 Meelaha laga helo tattoo madow oo madow ah
3.3 Soo noqo
4 Noocyada tattoos madow u kacay
4.2 Loogu talagalay dumarka
4.3 Ubax madow iyo casaan
4.4 Ubax madow Gothic
4.5 Magaca qofka
Micnaha tattoo-madow kacay
Taasi waa sababta qayb weyn oo ka mid ah dadkaas oo go'aansada midab madow marka ay timaado sawirka, waa sababta oo ah waxay rabaan ku yeel maqaarkaaga xusuus qof aad jeceshahay oo adduunkan ka tagay. Dhinaca kale, waxaa jira kuwa tixgeliya in tattoo-da madow uu kacay waxay astaan ​​u noqon kartaa, taa lidkeed, rajo. Tani waa sababta oo ah ubaxyadan madow dhab ahaan ma jiraan.
Sidoo kale waxay leedahay dhinac la xidhiidha kacdoonka maxaa yeelay way ka duwan yihiin, wayna ka duwan yihiin kuwa kale oo dhan. Dhaqamada qaar, ubax madow ayaa astaan ​​u ah dhamaadka safar dheer oo dhib badan oo loo turjumi karo inuu yahay gunaanadka marxaladda nolosheena ama dhamaadka wareegga. Sida aan arki karno, ayaa Tattoo madow waxay yeelan karaan fikradahooda wanaagsan.
Sawirrada Black Rose Tattoos
Meelaha laga helo tattoo madow oo madow ah
ka tattoos madow kacay waxay ku habboon yihiin ragga iyo dumarka labadaba. Laakiin markii laga fikirayo meel laga helo tattoo noocan ah, waxaa ugu wanaagsan in laga fikiro cabirkiisa iyo inaan dooneyno in maalin walba la arko ama aan u xirano qaab caqli badan. Xitaa sidaas oo ay tahay, had iyo jeer waxaa jira aagag jirka ka mid ah oo baahida loo qabo tattoo noocaan ah ay kordho. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin?
Shaki la'aan, gacmuhu waa mid ka mid ah shiraacyada waaweyn ee aan haysanno markay tahay xirato tattoo. Sidaa darteed, ma aha wax lala yaabo in tattoos madow oo madow sidoo kale lagu qaado meeshan. Qaar ka mid ah waxay ku jiri doonaan garabka ama garabka garabka, laakiin qaar kale oo badan ayaa doorta dhudhunka mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee la galiyo dhowr ubaxyo dhexdhexaad ah.
Qaybta sare ee gacanta sidoo kale waxay leedahay cabirro hagaagsan oo lagu waafajin karo tattoo noocan ah. Xaaladdan oo kale, waxaad dooran kartaa hal madow oo madow ama mid leh joomatari dhameystir ah, oo sidoo kale badanaa ah mid ka mid ah fikradaha waaweyn ee la tixgelinayo. Haddii aad ka fekereyso inaad hesho ubax madow tattoo on gacanta, markaa waxaad sidoo kale kaa qaadi kartaa mid ka mid ah kuwa ugu macquulsan, oo leh hooska madow iyo caleemaha gacanta la wareegaya, sida aan dhahno, laakiin sidoo kale gaara aagga lafdhabarta.
Waxaan sidoo kale aragnay tattoos badan oo kacsan laakiin dhabarka. Halkan waxaad sidoo kale ka geli kartaa naqshado aad u kala duwan. Kuwa ka soo baxa garabka garabka oo ka fudud, kuwa qabsada qeyb weyn oo maqaarka ka mid ah kuna soo biir fikrado kale ama astaamo shaqsiyeed. Fikrad kale ayaa ah in la xidho seddex ubax oo waaweyn oo ka kala baxa garba gees ilaa kan kale, taas oo ah, si siman. Laakiin hadaad jeceshahay inaan sawiro lafdhabartaada, astaamaha toosan sidoo kale waa mowduucyo. Waad dooran kartaa dhowr nooc oo noocan ah, laga bilaabo qayb ka mid ah qoorta illaa iyo si fiican gobolka lumbar.
Noocyada tattoos madow u kacay
Had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa dhadhanka qofka. Laakiin waa runtaa tattoos madow u kacay ragga Badanaa waxay udub dhexaad u yihiin meelaha sida gacmaha, jilbaha ama lugaha, iyo sidoo kale gacmaha. Intaas waxaa sii dheer, waxaa weheliya dhowr ubax ama mid aad u xiiso badan iyo aagag sidoo kale lagu xardhay khad madow, si ay ula socdaan. Naqshadaha qaabdhismeedka joomatari ee qaabdhismeedka ayaa kufiican kiiskan, laakiin sidoo kale kuwa macquul ah oo leh dhibco roob udhaxeeya ubaxyada.
Mararka qaarkood waan la kulannaa ubaxyo yaryar, oo leh jiridooda iyo qodaxdooda. In kasta oo dhinaca kale, ikhtiyaarka ah in la arko kaliya ubaxyada iyo xayawaanka la jarjaray waa mid ka mid ah fikradaha waaweyn. Aagga garabka, iyo sidoo kale garbaha garbaha ayaa ka mid ah eedeysanayaasha kiiskan. Aagga laabta ama bowdyaha waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo aad u qumman oo ku habboon meelaha loogu talagalay naqshad sidan oo kale ah.
Ubax madow iyo casaan
Inkasta oo mid ka mid ah macnahoodu uu ku xidhan yahay dhimashada, haddana waa in la xusaa inay la mid yihiin xoog iyo xamaasad ay ku qaadaan jidad cusub. In kasta oo lala xiriirin karo murugada iyo murugada ka timaadda qof aad jeceshahay, haddana waxaa loo arki karaa inay yihiin xasilloonida iyo xasilloonida. Casaanka cas wuxuu muujinayaa allabaryo laakiin sidoo kale jacayl ama xamaasad. Shaki la'aan, waxaa lagu dari karaa tattoos si ay isugu dheelitiraan macnaha ugu dambeeya. Waxaad isku dari kartaa ubaxyada aan soo sheegnay, ama sidoo kale, labada midab isla ubax.
Ubax madow Gothic
Ubaxyada madow, xaaladdan waxay ku aadi doonaan khad madow labadaba geesahooda iyo buuxinta. Midabka madow wuxuu noqon doonaa midabka ugu weyn ee tattoo sidan oo kale ah. Laakiin haa, marwalba waad raaci kartaa isaga dadka kale faahfaahin si aad uga dhigto xitaa gothic. Qaar ka mid ah dhakada, tukayaasha ama laga yaabee faahfaahin kale oo mugdi ah ayaa ku fiicnaan doonta in la siiyo dhammaadka tattoo
Shaki la'aan, iyadoo kuxiran macnaha aan siino, marwalba waan awoodnaa ku dar xarfaha ama magacyada dadkayaga qaaliga ah. Labadaba taranka iyo jirida waxay kufiicnaan doontaa in la qoro magacaas. Waad dooran kartaa xarfaha qaarkood oo leh dhammaystirka gothic-ga waxaadna heli doontaa wax ka badan natiijada cajiibka ah
Sawirro: Pinterest, googlechrome2016.ru, www.a2048.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoo madow ayaa kacay: ururinta naqshadaha iyo sharraxaadda macnahooda
Tattoo-ka oo muujinaya xoog iyo horumar
Tattoo gacmo-gacmeedka oo ku yaal gacanta: waxaad u baahan tahay inaad ogaato